Itoobiya: Xisbiyada Mucaaradka oo wadahadal buuxa ugu baaqaya Xukuumadda – Kasmo Newspaper
Itoobiya: Xisbiyada Mucaaradka oo wadahadal buuxa ugu baaqaya Xukuumadda
Updated - February 26, 2018 1:44 pm GMT
London (Kasmo), Dalka Itoobiya 2da xisbi ee ugu weyn mucaaradka ayaa xukuumadda u soo bandhigay qorshe wadaxaajood ah, si loo qiimeeyo xal suuragla ah oo loo helo qalalaasaha jira.
Xisbiyada AEUP (All Ethiopian Union Party) iyo Blue (Blue Party) waxay ku taliyeen shirweyne loo qabto dhammaan dadka reer Itoobiya ee ku kala firirsan daafaha dunida.
Warkaan waxaa baahiyay wargaysya ‘The Reporter’ ee ka soo baxa Itoobiya, kaas oo sheegay in arrinta looga dhawaaqay shir jaraa’id dhowaan.
‘Dadku waxay codsanayaan isbeddel Rejiim ee ma rabaan dib u habayn, sidaa darteed Xukuumaddu waa in ay isu diyaariso wadahadallo lala galo qaybaha kala duwan ee bulshada’. Sidaas ayaa lagu qoray war-murtiyeed ka soo baxay 2da xisbi, kuwaas oo sidoo kale dhaliil xooggan u soo jeediyay xaaladda degdegga ah ee dalka lagu soo rogay oo socon doonta 6da bilood.
Xaaladda Itoobiya waxaa kale oo wax ka qoray wargayska ‘Mail & Guardian’ ee Koofur Afrika, si gaar ahna ugu kuurgala arrimaha siyaasadda dalalka Afrika, kaas oo ku tilmaamay mid aan la dhayalsan karin.
Faallo Wargaysku qoray ayaa lagu macneeyay in ilaa intii rabshaduhu ka bilowdeen ay adagtahay sidii loo fahmi lahaa baaxadda dhibaatada ka socota gudaha dalka, sababta xukuumadda oo gacanta ku haysa warbaahinta darteed.
Wargaysku wuxuu xusay in warfidiyeenka dalka lagu hayo cagajuglayn, kuwa shisheeyahana laga horjoogsado sidii ay galaangal ugu yeelan lahaayeen wararka xasaasiga ah. Si la mid ah, Ururrada aan dawliga ahayn NGO iyo mucaaradka qudhooda sidaas oo kale ayaa loola dhaqmaa, sidaa darteedna waa adagtahay in muuqaal cad laga helo waxa dhacaya.
Xaaladda degdegga ah waxay mas’uuliinta u sahlaysaa in ay ku kacaan xarig iyo baaritaan, taasina waxay dhaawacaysaa xorriyadda isu socodkii iyo kulammadii dadweynaha.
In kasta oo Xukuumaddu, bilowgii Jenaayo, si loo dejiyo xiisadda,sii deysay maxaabiis badan, Mail & Guardian ma qabo in ay tahay iskudey siyaasad horusocod ah ee waa tijaabo naf-lacaari ah si loo sii haysto xukunka.